DHEGEYSO-Jawaari oo ka warbixiyey kulan uu laqaatay dhowr musharax. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Jawaari oo ka warbixiyey kulan uu laqaatay dhowr musharax.
Janaayo 21, 2017 8:48 b 0
Muqdisho, Jan 21 2017-Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya ee maanta uu Guddoomiyaha Golaha shacabku uu ku qaabilay xafiiskiisa ayaa kala ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Candiraxmaan Maxamed Faroole, Canab Maxamed Daahir iyo Maxamed Axmed Jabarti, waxayna kala hadleen hanaanka Doorashadda Madaxweynaha dalka sida ay u dhacayso iyo hubinta in Doorashadu u dhacdo si hufan oo dooh furan .
Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa dhamaan Musharaxiinta Guddoonsiiyey buugaag ay ku qoran yihiin taxanaha Doorashadda golayaasha sharci dajinta dalka laga soo bilaabo sanadkii 1959-kii iyo habraaca Doorashadda Madaxweynaha iyo xeer hoosaadka u gaar ah.
Maxkamadda ICJ oo warbixin ka soo saartay muranka badda Kenya iyo Soomaaliya.